Tin Maung Hlaing: ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး
ဆရာတော်လောင်းလျာမှာအင်းကြင်ပင်ရွာ-ဦးလူဖေ၊ဒေါ်ကြင်နုတို့ မှ ၁၂၅၇ ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း၆ရက် တနင်လာနေ. နံနက် လေးချက်တီးကျော်မွေးဖွားခဲ.သည်။ ကျေးလက်တောရွာတွင်ကံက ပစ်ချခဲ.သော်လည်း ဆရာတော်ကားမင်းဆွေစိုးမျိုးဖြစ်ဧ။်။ ဆရာတော်ဧ။် အဘွား(ဦးလူဖေဧ။်မိခင်)ကား အိမ်ရှေ့စံမိဖုရား တစ်ပါးဖြစ်ဧ။်။ ခင်ခင်ဟုခေါ်သည်။
ဆရာတော်ဧ။် အဘိုးဦးကူးကားဘဏ္ဍ၀န်ဖြစ်သည်။ယခုအင်းကြင်ပင်မြောက်ဘက် ကျောင်းကြီးဒကာဖြစ်သည်။ ၁၂၇၇ ခုနှစ်တွင်ရဟန်းဖြစ်၍ ၁၂၈၀-၈၁ ခုနှစ်များ မန်းတလေးမစိုးရိမ်ဆရာတော် အဘိစဇ မဟာရဠဂုရု ထံပညာသင်ကြားခဲ.ဧ။်။ ၁၂၈၅ ခုနှစ်အထိ အင်ကြင်ပင်ကျောင်းတွင်ပင် နေပြီး ထိုနှစ်နယုန်လ တောထွက်တော်မူသည်။
မယ်တော်ကြီးဒေါ်ကြင်နုမှာ ကျောင်းပွဲဘုရားပွဲရှိတိုင်း တောင်ဝှေးတစ်ချောင်းဖြစ် ကျောင်းသို.လာရာ လာတိုင်းပင် ငို၍ပြန်ရဧ။်။ သတင်းအစအနမျှ စုံစမ်းမရသဖြင်. တစ်နှစ်အကြာ သားသောကဖြင်.ပင် ကွယ်လွန်ရရှာဧ။်။
၁၂၈၅ ခုနှစ်တစ်ဝါ ရွှေဘိုမြို. ပုသိမ်တောရ ဆရာတော်ထံနေ၍ ၀ါကျွတ်လျှင် မင်းဘူး ရွှေစက်တော်မှစ၍ တောတောင်အနှံ. ကြွရောက်တော်မူသည်။ ထိုနှစ်ကုန်ခါနီးမှာပင် ကျောက်ဆည်ဝေဘူလတောင်ဝှမ်း အင်္ဂလ်ိပ်သင်္ချိုင်းအနီးရှိ လျှိုမြောင်အကြားတွင် သီတင်းသုံးဧ။်။ ကျောက်ဂူတစ်ခုလည်းရှိသည်။ တစ်နေ.သောအခါ ဟင်းရွက်ခူး ထင်းခွေသူများက ဂူထဲတွင် မကျန်းမာ၍ လဲနေသည်ကို တွေ.ရမှာအစ ဆေးဝါးကုသကာ ဆန်စက်သူဌေးဦးပျော.က နေ.ချင်းပြီး
ကျောင်းဆောက်လှူရန် လျှောက်သော်လည်း ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ခွင်.မပြု ကပ်မိုးကပ်ကာနှစ်ခန်းကျောင်းကလေးဆောက်လှူပြီးသော်လည်း အရက်နှစ်ဆယ်ခန်. ကျောင်းဒကာအား စကားမပြော။ တို.များကိစ္စမပြီးခင် လူတွေက ၀ိုင်းအုံလိုက်နေလို. ပုန်းစရာတောင် မရှိတော.ဘူးဟု မိန်.တော်မူဧ။်။
ထိုတောထွက်သော နှစ်၊လ၊ပိုင်း အတွင်းတွင်ပင် တတိယအဆင်.အထိပြီးစီးတော်မူဟန်ရှိသည်။အဲဒါတော. မကြာဘူးဟဲ. ဟူ၍သာ မိန်.တော်မူဧ။်။အနာဂမ်အဖြစ်နှင်.ကား နှစ်ပေါင်းမျာစွာ ကြာလွန်နေရဟန် တူလေသည်။ အဘိညာဉ် ကိစ္စများလည်းတစ်ပါးတည်း ပြီးပြည်.စုံမူကြောင်း အထောက်အထားများစွာရှိဧ။်။ ထိုအချိန်မှစ၍ကျိန်းစက်သည်ကိုလည်းမတွေ.ရ။ရာသီဥတုကြောင်.နှာစေးခြင်းမရှိဟုဆိုကြသည်။
ဦပျော.ကားဘုန်းကြီး ထွက်သွားမည်စိုးသဖြင်. အထူးဂရုစိုက်နေဧ။်။ ၁၂၈၉ ခုနှစ် သတင်းစကားအရ ခမည်းတော်ရောက်လာဧ။်။ ရဟန်းပြုပေးပြီးနောက်ခမည်းတော် ဦးပဥွင်းကြီးနှင်.အတူအင်ကြင်းပင်သို.ပြန်ကြွရသည်၊ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျောက်ဆည်နှင်.အင်ကြင်းပင်ခြောက်လစီ သီတင်းသုံးသည်။ ၁၃၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ရွှေဘိုတွင် အောင်မြေရိပ်သာ ဖွင်၍ နှစ်လခန်. သီတင်းသုံးသည်။
ဆရာတော်ကား ဓုတင် တစ်ဆယ်.သုံးပါးကို အခါအားလျော်စွာ ဆောင်တော်မူဧ။်။ အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပင်တိုင်ကမ္မဋ္ဌာန်းအဖြစ် ရှုပွားတော်မူပါသည်။ ကျောက်ဆည်ပတ်ဝန်းကျုင်၌် ရဟန်းဆယ်.နှစ်ဝါလောက်မှစ၍ ဆရာတော်ဧ။် သတင်းမှာ သင်းပျံ.စပြုလျက်ရှိပါသည်။ ကျောက်ဆည်မြို. ဖောင်ရွာဆန်စက်ပိုင်ရှင် သူဌေးဦးပျော. ဇနီးဒေါ်မြင်. ခဲအိုဦးချက်နှင်. သားမက်တော်သူ ဦးကြောင်နှင်. ဦးလှကျော်တို့ မှစ၍ ကျောက်ဆည်မြို.သူမြိုသားများ ပူဇော်ခွင်.ရခဲ.ကြပါသည်။ ဦးပျော.က ကျောင်းဆောက်လှူခွင်.ပြုရန် အတန်တန်လျှောက်၍ လက်ခံတော်မူရကာ ကျောင်းပြီးသောအခါ -ဒကာကျောင်းကတယ်ကျယ်ဝန်းသကိုး၊ကျုပ်က ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း လိုတာပါ ဟုမိန်.တော်မူဧ။်။
စင်စစ်ကျောင်းမှာ လေးတိုင်စင်သာသာမျှသာ ရှိပါသည်။
ဆရာတော်သည် ဓုတင်တစ်ဆယ်.သုံးပါးလုံးကို ဆောင်တော်မူရာ ကမ္မဋ္ဌာန်းအလုပ်ခွင်အတွက်တွန်းအားအကောင်ဆုံးဖြစ်သော နေသဇ်ဇိကင်္ဂဓုတင်ကိုမူ အထူးရှေ.တန်းတင်၍ ဆောင်တော်မူသည်။နည်းခံတပည်.များကိုလည်း အထူးတိုက်တွန်း ပြညွှန်တော်မူ လေ.ရှိပါဧ။်။
ထိုဓုတင်အကျင်.မှာ လူသာမန်အမြင်၌် ပြင်းထန်လွန်းသည်၊ကျန်းမာရေးချို.တဲ.လေမည်လားစသည်ဖြင်.ထင်ဖွယ်တွေးဖွယ်ရှိသော်လည်း ဆရာတော်ကမူ အရှင်မဟာကဿပ အရှင်ဗာကုလ စသည်တို့ ကိုထောက်ပြကာ ပို၍ပင် ကျန်းမာသက်ရှည်နိုင်ကြောင်း ရဲရဲကြီးတိုက် တွန်းတော်မူပါသည်။ အာမခံချက်ပေးတော်မူပါသည်။ စံနမူနာလည်းပြတော်မူပါသည်။ “ဘုရားဆုံးမတာက ဆင်းရဲအောင် မဆုံးမဘူး၊ ချမ်းသာအောင်ချည်းပဲ၊ကိုယ်ကသာထင်ချင်သလို ထင်နေတာ။” တစ်ရက် (၂၄-နာရီ) ပြည်.သွားပြီဆိုတော. ကောင်ကောင်းလှလှကြီးသိပါလိမ်.မယ်၊ တချို.အားထုတ်တာ အနှစ်လေးငါးဆယ်ရှိပြီလို.ပြောကြတယ်၊ သေသေချာချာစိစစ်ပြီး ကြည်.ပါ၊ တစ်ရက်ပြည်. ရက်လား။ နေ.တိုင်းအိပ်နေတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့ အိပ်ရေးမ၀ကြတာလဲ။ အိပ် ရေးဝအောင် လုပ်တာမှမဟုတ်ပဲ။ အိပ်ချင်ရင် မအိပ်ချင်တဲ.နေရာ ရှိတယ်။ အဲဒီနေရာကို ရောက်အောင်သွား ၊အိပ်ရေးဝသွားလိမ်.မယ်။အဲဒါ” (နေသဇ်ဓုတင်) ရန်သူ(ထိနမိဒွ)ကို နိုင်တဲ. လက်နက်ဗျာ.။ စစ်တိုက်မယ်နဲ. ခေါင်းအုံးကြီးတွေနဲ. ဆိုတော. မနိုင်တာဟာ ဒါကြောင်.ဗျာ။”
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကပင် တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် အံ့သြကြည်.ညိုဖွယ် သတင်းထူများက ဖုံးကွယ်၍ မရအောင် ဖြစ်လာတော၏။ နွားကျောင်းသား ကုလာလူမျိုး “အလီ” ဖောင်ရွာ နွားနို.ရောင်းကုလား “ဒေ၀ဒတ်” ကျောက်ဆည်မြို. မင်းရပ်”ဦးခ” စသောမျက်မြင်ကိုယ်.တွေ. ပုဂ္ဂိုလ်များတနေ.တခြား များပြားလာသည်နှင်.အမျှ နည်းခံပွားများသောယောဂီများပင် တနေ.တခြား တိုးပွားခဲ.ပါသည်။ ကုလားမျာကမူ –
“ဒီတောင်ပေါ်မှာ ဗမာဘုန်းကြီး လူစွမ်းကောင်းရှိတယ်” ဟုတအံ.တသြပြောဆိုကာ ကုလားလူမျိုးများပင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် ခံယူလာကြပါသည်။ ဝေဘူလ ဝေဘာရ တောင်စဉ်တစ်ကြောရှိ စေတီငယ်များအား ကောင်းကင်ယံမှ ပျံကြွကာ ဘုရားမီး ပူဇော် သည်ကိုလည်း အကြိမ်ကြိမ်ဖူးတွေ.ရသူများ ယခုတိုင် ရှိကြပေသေးသည်။
ကျောက်ဆည်မြို၏အရှေ့ တောင်အရပ် တောင်စဉ်တောင်ဝှမ်းများတွင် “တောင်ပေါင်းချောင်”ခေါ်သော အရပ်ဌာန တစ်ခုရှိ၏။ လွန်ခဲ.သော နှစ်ပေါင်း ခုနှစ်ဆယ်ခန်.က ထို ၌်သီတင်းသုံးသောတောင်ပေါင်းချောင်ဆရာတော် ခေါ်ရှေ.မြင်နောက်မြင်ဆရာတော် တပါးရှိခဲ.ဖူးရာ ၄င်းဆရာတော်ကြီးကလည်း “ဝေဘူလချောင်နေရာ၌် အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တစ်ပါး ထွန်းပေါက်မည်” ကို ကြိုတင်
ပြောထားခဲ.ဖူးကြောင်း ကျောက်ဆည်ပတ်ဝန်းကျင်၌်ရှေ့ မီ နောက်မီ လူကြီးသူမများ ပြောဆိုကြပါသည်။
Posted by Simon Cole at 1:45 AM